यौन/स्वास्थ्य Archives - Page 22 of 31 - Saptakoshionline
भनिन्छ, जहां आगो हुन्छ, त्यहां उज्यालो पनि हुन्छ, जहां फूल हुन्छ, त्यहां सुगन्ध पनि हुन्छ । दुवै एक(अर्काका हिस्सा हुन, जसमा सम्भावनाहरू लुकेका हुन्छन् । यसरी नै जहां प्रेम हुन्छ, त्यहां यौनको सम्भावना पनि हुन्छ । सत्य त यही हो कि यौनको मात्र सम्भावना नभएर प्रेमको कुनै मोडमा वा धरातलमा प्रेम यौन कै रुपमा व्यक्त हुन्छ र यदि यही यौन मात्र वासनाको पूर्तिका लागि गरिन्छ भने त्यहां प्रेम व्यक्त हुंदै...
शनिबार, भाद्र ०९, २०७५
इटहरीको एकम्बा मा बर्थिङ सेन्टर उद्घाटन
इटहरी/इटहरी उपमहानगरपालीका वडा नम्बर १६ मा बर्थिङ सेन्टर उद्घाटन भएको छ । इटहरी उपमहानगरपालीकाले बर्थिङ सेन्टर खोल्ने कार्यक्रम अन्तर्गत वडा नम्बर १६ मा बर्थिङ सेन्टर खोलीएको हो । कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि उप मेयर लक्ष्मी गौतमले महिलाहरुले आगामी दिनहरुमा सुत्केरी हँुदा घरमा नभई बर्थिङ सेन्टरमा गइ सेवाको उपयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो । उपमेयर गौतमले नगर लाई सत प्रतिसत स्वस्थ्य संस्थामा सुत्केरी गर्न आवस...
यौनसँग जोडिएका केही काम लाग्ने तथ्य
हरेक व्यक्तिको जिवनमा यौन भन्ने कुरा एक महत्वपूर्ण पक्ष हो । त्यसकारण यौन तथा प्रजननका विषयमा जानकारी पाउनु हरेक व्यक्तिका लागि महत्वपूर्ण हुन्छ । कण्डम निर्माता कम्पनी ड्युरेक्सले गरेको एक सर्भेक्षणका अनुसार स्वस्थ मानिसले वर्षमा औषतमा १०३ पटक, हप्तामा औषतमा १.९८ पटक तथा दिनमा ०.२८ पटक सम्भोग गर्छ । यदि तपाइँले जिवनमा यौनलाई सही ढंगबाट प्रयोग गर्नुभयो भने यसले विभिन्न खालका फ...
शुक्रबार, भाद्र ०८, २०७५
एक युवा जसलाई हस्तमैथुन गर्न मन लागिरहन्छ र दिमागमा यौनका कुरा मात्र खेलिरहन्छ । के यो रोग हो ? किन यौन सम्बन्ध राख्दा अण्डाशय दुखेर आउछ ? विशेष गरेर युवावस्थामा यौनेच्छा तीव्र हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन भने सजिलो हुँदैन । यस्तो बेला दिमागमा यौनसम्बन्धी सोच आउनु स्वभाविक हो । यौनेच्छा स्वस्थ्य व्यक्तिको एक महत्वपूर्ण पाटो हो । हस्तमैथुन यौनेच्छा साम्य पार्ने एउटा उत्तम उपाय हो । यसलाई रोग मान्...
काठमाडौँ । यौन सम्बन्ध भनेको दुई महिला पुरुषबीचको प्राकृतिक आकर्षणको मुख्य कारण हो । तर यौन सम्बन्ध राख्दा महिला र पुरुषको मनमा कस्तो भाव आउँछ भन्ने विषयमा सबैलाई कौतुहलता हुन्छ। यस विषयमा धेरै अध्यन भएका छन् भने लेख रचना समेत लेखिएका छन् । पछिल्लो पटक गरिएको एक शोधले महिलाले ओच्छ्यानमा के चाहन्छन् भन्ने विषयमा नयाँ तथ्य बाहिर ल्याएको छ । यौन विज्ञको सहभागितामा ७०० महिलामा गरिएको अध्यनबाट महिला...
बिहिबार, भाद्र ०७, २०७५
के हो यौन दुर्बलता ? समाधानका उपाय के के छन ?
के हो यौन दुर्वलता ? सामान्य अर्थमा यौन इच्छामा कमी हुनुलाई यौन दुर्वलता भनिन्छ । यसको लक्षण मानसिक तथा शारीरिक दुबै रुपमा देख्न सकिन्छ । यौन इच्छामा कमि हुनु, यौन सम्पर्कमा रुची नहुनु जस्ता कुराले मानसिक रुपमा यौन दुर्वलताको संकेत गर्दछ भने यौन इच्छा वा सम्पर्कका बेला लिंगमा कडापन नआउनु, मोटो वा ठूलो नहुनु शारीरिक रुपमा देखिने यौन दुर्वलताको संकेत हो । अर्थात यो या त्यो जुनसुकै कारणले पनि यौनक...
म ३० वर्षीय विवाहित पुरुष हुँ । हप्तामा दुई पटक श्रीमतीसँग यौन सम्पर्क राख्छु । यौन सम्पर्कका बेला मेरो वीर्य चाँडै स्खलन हुने गरेको छ । श्रीमती बेलाबेलामा झर्किने गर्छिन् । यौन सम्पर्कको अवधि कति हुनुपर्ने हो ? शीघ्र पतन रोक्ने केही उपाय बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ । आर सेक्स अवधि यति नै हुनुपर्छ भन्ने कुनै मापदण्ड छैन । तर, धेरै मानिस अहिले पनि शीघ्र पतन तथा ढिला पतनको विषयमा सोचेर यत्तिकै है...
आधारभुत यौन शिक्षा, सुरक्षीत गर्भपतन सेवा र वैवाहीक समानता विषयक संबाद कार्यक्रम सम्पन्न
इटहरी, आधारभुत यौन शिक्षा, सुरक्षीत गर्भपतन सेवा र वैवाहीक समानता विषयक संबाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । कुनै समय गर्भपतनलाई ठूलो मान्ने नेपाली समाज बिस्तारै परिवर्तन हुँदै गएको छ । कानुनले पनि केहि विशेष अवस्थामा गर्भपन गराउन मिल्ने छुट दिएको तर, अझै पनि नेपालका आधा बढी महिलालाई सुरक्षित गर्भपतन गराउने स्थान बारे जानकारी नभएको कार्यक्रममा सहभागी नवल रिजालले बताएका छन । गर्भपतनको अवस्था बारे महि...
कोशी टप्पुमा पाँच हात्ती मध्ये चार गर्भीणी
इटहरी । कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षमा रहेका पाँच हात्ती मध्ये चार वटा गर्भीणी भएपछि उत्साहका साथ छावाहरुको प्रतिक्षा गरिदैछ । लामो समयपछि आरक्षमा रहेका हात्तीहरु छावा जन्माउने तयारीमा रहेका कारण आरक्षमा मात्र नभएर विभाग तथा मन्त्रालयमा समेत उत्साह बढेको हो । आरक्षमा रहेका पाँच हात्ती मध्ये चार वटा गर्भीणी रहेको र एउटाले दुई महिना भित्रमा छावा जन्माउन लागेको कारण आरक्षका साथै विभाग र मन्त्रालय...
तुरुन्तै “सेक्स पावर” बढाउने घरेलु औषधी
यौन दुर्बलताले धेरै मानिस पीडित छन् । यसको उपचारको लागि कतिपयले बजारमा पाइने बिभिन्न प्रकारका औषधी प्रयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस्ता औषधीको प्रयोगबाट दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्दछ ।तनावपूर्ण जीवनशैली र अव्यवस्थित खानपानले सेक्स शक्तिमा ह्रास आइरहेको हुन्छ । यसको उपचारमा मानिसहरुले थुप्रै पैसा खर्च गरिरहेका हुन्छन् । तर, उनीहरुलाई सेक्स क्षमता बढाउने औषधी आफ्नै घर वरपर निःशुल्क ...
बुधबार, भाद्र ०६, २०७५